Vagadziri vezvigadzirwa uye fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri - Chikamu 3
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa mukiriniki yekuchenesa ropa senge pombi ye hemodiafiltration uye hemofiltration kurapwa uye kuendesa kwekutsiva mvura.
Iyo inoshandiswa kune hemodiafiltration uye hemodiafiltration. Basa rayo kutakura iyo yekutsiva fluid inoshandiswa pakurapa
Mhando dzakasiyana Zvishongedzo Tubing zveHDF zvakakodzera kune akasiyana dialysis muchina.
Unogona kuwedzera mushonga nezvimwe zvinoshandiswa
Inonyanya kuverengerwa pombi, T-mubatanidzwa uye pombi chubhu, uye inoshandiswa kune hemodiafiltration uye hemodiafiltration.
SXG-YA, SXG-YB, SXJ-YA, SXJ-YB, SXS-YA uye SXS-YB
Mumwe-murwere pasuru, imwechete-yemurwere pasuru (yakanaka pasuru),
Kaviri-murwere pasuru, kaviri-murwere pasuru (yakanaka pasuru)
Inoraswa yekunze kwekupararira kwetubhu kit yekugadzira yemoyo-mapapu muchinac
Ichi chigadzirwa chinoumbwa nepombi chubhu, aorta ropa rekupa chubhu, yekuruboshwe moyo yekukwevera chubhu, kurudyi moyo yekukwevera chubhu, yekudzosera chubhu, yekuchengetedza chubhu, yakatwasuka yekubatanidza uye nzira-nhatu nzira yekubatanidza, uye inokodzera kubatanidza yeyakagadzirwa moyo-mapapu muchina kune akasiyana zvishandiso zvekugadzira arteriovenous ropa system wedunhu panguva yekuwedzera kweropa kutenderera kwekuvhiyiwa kwemoyo.
Ropa microembolus firita yekushandisa kamwe chete
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa mukushanda kwemoyo pasi pechiono chakanangana kusefa ma microembolisms akasiyana siyana, nyama dzevanhu, kugwamba kweropa, ma microbubble uye zvimwe zvidimbu zvine simba muropa rekuwedzera kweropa. Inogona kudzivirira murwere's microvascular embolism uye kudzivirira iyo yeropa microcirculation.
Ropa mudziyo & firita yekushandisa kamwe chete
Chigadzirwa chacho chinoshandiswa pakuvhiya kweropa kunze uye rine mabasa ekuchengetedza ropa, firita uye kubvisa bubble; mudziyo wakavharwa weropa & firita inoshandiswa kupora ropa remurwere panguva yekuvhiya, iyo inonyatso kudzora kutapudzwa kwezviwanikwa zveropa uku uchidzivirira mukana weropa-hutachiona, kuitira kuti murwere awane yakavimbika uye ine hutano autologous ropa .
Yekuwedzera chubhu (ine matatu-nzira vharuvhu)
Iyo inowanzo shandiswa kune inodiwa chubhu inorebesa, ichipinza akawanda marudzi e medine panguva imwechete uye nekukurumidza infusion.It inoumbwa nenzira nhatu vharuvhu yekushandisa kwekurapa, nzira mbiri, mbiri nzira chivharo, nzira nhatu, chubhu kiramba, kuyerera regulator, nyoro chubhu, jekiseni chikamu, yakaoma chinongedzo, tsono hub（maererano nevatengichinodiwa).
Inokodzera kubaya uye dosing, uye nyore kushandisa.